Kabaha labiska ragga - Dharka Ragga ee Qaabka | Ragga Stylish
Kabaha dharka ragga
Waxaan ku noolnahay xilli ay jiraan moodooyin aan caadi aheyn oo leh haybtooda aadka u muhiimka ah iyo cidda si dhab ah u ah waxaa loogu talagalay ku dhowaad dhammaan noocyada dharka. Kabaha ma aysan aheyn dhameystirkii weynaa ee sifiican loogu lebistay, laakiin ujeedadooda bilowgii waxay ahayd halkii ay ka aadi lahaayeen isboorti, raaxo iyo iftiin. Moodooyinka iyo isbeddellada ayaa durba qaabkan ka dhigay halka uu u baahan yahay oo kabaha dharka ee ragga ayaa loo abuuray.
Sneakers dharka waxaa loogu talagalay si ay u labistaan ​​oo ay isu qalabeeyaan sidii dhammaystir buuxa dhammaan howlaha maalinlaha ah, waxay raadinayaan inay si dabiici ah ula qabsadaan nooc kasta oo duruuf ah. Noocyada ay ka mid yihiin Nike, Adidas, Balance-ka Cusub ayaa ka mid ah kuwa iyagu doorbiday nashqadahaan waaweyn sidaas darteedna waxay awood u yeesheen inay la jaanqaadaan dhadhan iyo xarrago shakhsiyaad da 'kasta leh.
1 Kabaha dharka
2 Sidee loo kala saaraa kabaha dharka ee kuwa aasaasiga ah?
3 Kabaha dharka casriga ah
4 Kabaha dharka magaalada
5 Kabo badan oo jilicsan oo da 'weyn
6 Dharbaaxo qaabeedka Nautical
7 Kabaha cad
Si loo helo moodooyinkan noocyada waaweyn ayaa sharad ku leh qalab tayo sare leh, si raaxadu u gaarto gees walba oo cagta ah. Iyagu waa nashqado raaxo leh, oo leh cirbad jilicsan iyo ergonomic insoles sidaa darteedna waxay u adkeysan karaan socodka dheer ayagoon cagaha ka daalin.
Dabcan, la qabsiga waxay ka dhigan tahay in loo maleeyay in cagaha waa inuu noqdaa mid dhidid-la'aan ah oo cusub illaa heerka ugu sarreeya, si aad ugu kalsoonaato qaabkan kabaha kabaha.
Sidee loo kala saaraa kabaha dharka ee kuwa aasaasiga ah?
Kabaha aasaasiga ah waa kuwo aad u badan oo leh qiimo ka yar ama ka yar dhexdhexaad ah. Waa kabo aan caadi ahayn oo loo isticmaalo munaasabadaha aan rasmiga ahayn. Waxaa lagula talinayaa inay xirtaan funaanado, funaanado iyo jiinis, waana sababta loo isticmaalayo in lagu arko ragga dhallinyarada ah.
Kabaha dharka ayaa leh wax yar oo raaxo ah, uga gudub qaabka wadada una gudub wax rasmi ah oo aan caadi ahayn oo ay ragga badanaa u isticmaalaan dhalinyarada.
Waxay isku daraan funaanado aasaasi ah, funaanado iyo boolo, xitaa surwaal qafiif ah, nooca gaadha anqawyada. Xitaa waxay ku habboon yihiin suudhadh go'an oo fudud oo leh qaanso ama xarig cad.
Kabaha dharka casriga ah
Kabahaan waxaa abuuray noocyo waaweyn iyo naqshadeeyayaal caan ah, iyada oo ay khasaaro tahay in aan lagu wada gaadhin dhammaan jeebabka. Waxay ku xiran yihiin jooniska maqaarka ah iyo funaanado fudud. Fursadaha kale in la isku daro waxay la socdaan jaakadaha nooca blazers-ka ah ama surwaal madow iyo midabada kabaha badanaa waxaa lagu doortaa madow iyo caddaan isku dhafan ka wanaagsan.
Kabahaasi waa kuwo casri ah, la safeeyey iyo dabcan isboorti. Iyagu waa nashqado gaar ah, qaar ka mid ah kuwa caadiga ah, laakiin leh faahfaahin faahfaahsan si loo muujiyo taabashada xarrago.
Kabaha dharka magaalada
Waxay yihiin kuwo aan caadi ahayn, oo leh qalab tayo sare leh oo ka jaban jeebka, in kasta oo ay abuureen magac caan ah sida Pepe Jeans ama Munich. Moodelladani waxay calaamad u yihiin habka loogu xiro xargaha xasiloonidana waa la damaanad qaaday. Isku-darka ayaa weli ah ugu dambeyntii leh caato, joonis qurux badan ama surwaal.
Inbadan oo ka mid ah qaabab isboorti ah ayaa laga heli karaa noocyo sida Guess, lagu sameeyay waxyaabo ay ka mid yihiin maqaar, xargo leh iyo qaab nooc kasta leh oo da 'kasta leh. Calaamadda Skechers ayaa sidoo kale ku sharraxeysa naqshadaha gaarka ah sida kuwa sawirka ku jira, oo leh joog fidsan iyo xadhig aan xadhig lahayn, maaddaama ay la jaanqaadayso anatomy-ka cagta oo leh taam weyn.
Kabo badan oo jilicsan oo da 'weyn
Waxay yihiin kabo isboorti oo raaxo leh oo leh nashqado aan laga adkaan karin iyo taas beddel dhibaato la'aan kabaha ragga caadiga ah. Qaabkeedu wuxuu ka kooban yahay xiritaanka xargaha waxaana lagu sameeyay maqaar dhalaalaya si loo siiyo xarrago. Callaghan iyo Kangaroos waxay ku sharraxayaan nuuca noocan ah, waa kabo isboorti oo magaalooyinka ah iyo in lagu daro dhar qurux badan.
Dharbaaxo qaabeedka Nautical
Kabahaani waxay u taagan yihiin qaabkooda caadiga ah iyo astaamaha ah inuu yahay kabo fudud, fudud oo leh caag feeraha oo keliya ah. Qaabkeeda iyo sawirkeedu wuxuu si gaar ah u muujinayaa qaabka badda, in kasta oo ay haddaba jiraan magacyo doorbiday inay qaabkan ka dhigaan kuwo aad u magaalo badan, kana saaraya faahfaahinta qaarna ka dhigaya ergonomic badan. Astaamaha Timberland iyo Skechers waxay ku sharfayaan qaababkan casriga ah.
Sideen ku sharaxnay bilowgii fuliyaha qarniga XNUMX-aad ayaa dib isu soo saaray, xirashada suud leh kabo isboorti mar dambe ma ahan wax aan caadi aheyn oo qatar ah, laakiin sidoo kale Waxay ku siineysaa xarrago waxaadna umuuqataa xoogaa taxaddar la'aan. Kabaha isboortiga ee cadcad ayaa ah kuwa ugu labbisan dharka noocan ah, qaarkood xitaa waxay doortaan inay galaan wadarta Caddaan, (dhammaantood waxay ku labisan yihiin caddaan) ama madow iyo caddaan. Shaki kuma jiro taas kabaha isboorti ee cad waxay u dhigmaan midab kasta, walxo iyo qaab. Saraawiil laga sameeyay shay kasta, ha ahaato denim, corduroy, knitted ... sidoo kale waxay si fiican u guursadaan.
Midkee ayaynu dooran karnaa? Runtu waxay tahay inay jiraan tusaalayaal aan tiro lahayn oo mar alla markii aad naftooda ku quusto raadintooda, waxay kaa dhigeysaa mid aan awoodin inaad mid ka mid ah si gaar ah u doorato, maadaama dhammaantood ay jecel yihiin. Waxaa jira noocyo sharad ku samaynaya isbeddelladan oo nashqaddoodu ay tahay dhammaad-sare, raaxo iyo neefsasho tayo leh, oo noqda wax maalgashi badan
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Kabaha dharka ragga